Ebumnuche 2014 B2B Digital Marketing, Budget, Ọrụ na Ihe |ma Aka | Martech Zone
Sọnde, Septemba 14, 2014 Sọnde, Septemba 14, 2014 Douglas Karr
Omobono kacha ọhụrụ Ihe Na-arụ Ọrụ Ebe nnyocha na-enye a na-ekpughe foto nke B2B ahịa dijitalụ na 2014. Na mmekorita ya na Ndị Ahịa na Circle Nnyocha, Ha jụrụ ndị ahịa ahịa azụmaahịa 115 gbasara ahịa ahịa dijitalụ ha ebumnuche, mmefu ego, ihe omume na nsogbu. A ga-ebipụta akụkọ zuru ezu, gụnyere nsonaazụ nyocha, nyocha ọkachamara na aro. Iji nweta otu dijitalụ gị ozugbo o nwetara ya, biko debanye na saịtị Omobono.
Ihe nchoputa di na akuko a bu ihe ndia:
B2B Ibu ụzọ a na-eche na ịntanetị, ndu ndị ahịa na mmata aha.
B2B Ego ahia na-akwado nkwado dijitalụ na 39% nke mmefu ego niile.
Igodo B2B ahia ahia bụ mmadụ mgbasa ozi na mobile.
Nsogbu B2B Ahịa gụnyere ụkọ akụrụngwa, etu esi arụ ọfụma na enweghị ezigbo ụlọ.
Uzo di na B2B Nka ahia na- nchịkọta & ịkọ akụkọ, atụmatụ & atụmatụ, na nyocha & nghọta.
N'iji B2B Marketing ROI na-aga n'ihu ịbụ ihe ịma aka, ebe naanị 16% nke ndị ahịa na-eche na ha na-atụle nloghachi na ntinye ego.
Nchịkọta nke isi ihe Omobono bụ ihe omuma a n'okpuru:
Tags: b2bb2b mmefu egob2b ahịa dijitalụahịa b2bb2b ahia omumeb2b ahia egonsogbu b2b ahiaEbumnuche b2bmkpa b2bb2b elekọta mmadụ mediab2b chere echiche nduinfographicomobono